Però: Tompondaka manerantany tamin’ny lalao surf · Global Voices teny Malagasy
Però: Tompondaka manerantany tamin'ny lalao surf
Voadika ny 08 Novambra 2010 12:14 GMT
Nanomboka tamin'ny faha 19 Oktobra, nandeha tany Però ny mpilalao ‘surf’ avy ao Però, Kanadà, Alemaina, Goatemalà, Aostralia, Japana, Frantsa, Ekoatera, Orogoay ary Afrika Atsimo mba handray anjara amin'ny Fiadiana ny ho tompondaka manerantany Billaboing ISA lalao ‘surf’ taona 2010.
Taorian'ny fifaninanana izay naharitra andro maromaro, nibata ny amboara manerantany teo amin'ny ekipa rehetra nifaninana ny ekipa avy ao Però. Fanatanjahan-tena manana ny lazany tokoa ny ‘Surf’ ao Però, ary mankalaza ny fandresen'ny ekipany ny Peroviana.
Fifaninanana manerantany taranja Surf taona 2010 – Punta Hermosa, nalaina tao amin'ny flickr nampiasain'i CHIMI FOTOS, nahazoan-dàlana Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons license
Ny blaogy Mejor hablar de ciertas cosas [es] (tsara ny miresaka momba toe-javatra sasany) nosoratan'i Luizcore, dia namoaka sy nitatitra ny filaharana farany:
Nahazo ny voalohany teo amin'ny isan-tarika ny ekipa nasionalin'i Però teo amin'ny Surf nandritra ny fifaninanana natao tao Punta Hermosa. Nahazo ny isa ambony indrindra i Però teo amin'ny firenena rehetra raha araka ny famintinana natao ary nanatombo kely noho i Aostralia, izay nahazo ny laharana faharoa.
Mankalaza ny fandresena ihany koa ny vondrona ao amin'ny blaogy La mula [es], fa nofaranany tamin'ny fanakianana vitsivitsy ny lahatsorany fohy:
Mankalaza ny fandreseny i Però. Omaly, voatondro ho tompondakan'ny taranja Surf Billabong ISA manerantany taona 2010 ny ekipan'i Però, izay natao teny amin'ny tora-pasika Caballeros y Señoritas, teo amoron-dranomasin'ny distrikan'i Punta Hermosa. Na izany aza, na teo anoloan'ny fandresena lehibe, dia tsy namafisina tao amin'ny lohatenin-baovao teo amin'ny gazety miompana amin'ny fanatanjahantena izany.
Ny blaogy Historias de Surf [es] dia nitatitra ny tantaran'i Matías Mulanovich, lehilahy mahery fo tao amin'ny ekipa nasionaly avy ao Però eo amin'ny lalao’ surf’, araka ny nambaran'io blaogy io dia:
Toy izao ny zava-niseho. Mpilalao miisa efatra no niditra an-dranomasina mba hiady tamin'ny fiodinana fahafolo teo amin'ny lalao: teratany Peroviana Matías Mulanovich, Tahitiana Hira Teriinatoofa ary Aostraliana Mick Campbell sy Drew Courtney. Efa tafakatra amin'ny dingana famaranana ary hifanandrina toy ny mahazatra amin'ny famaranana ny mpilalao anankiroa izay tsara isa indrindra Gabriel Villarán sy ilay Breziliana Alan Jhones.
Samy nanao ny kajikajiny ny tale teknikan'ny ekipantsika sy ny tovolahy avy ao amin'ny FENTA (Federasiona nasionalin'ny filalaovana Surf). Raha samy mitana ny toerana voalohany sy faharoa eo amin'ny isan-tarika Matías avy ireo Aostraliana dia mazava ho azy fa norombahiny ny maha-tompondaka
Campbell, biby mahery an-dranomasina amin'ny ranomasina rehetra eto an-tany, dia anarana nentina nilazana ny fotoana fangalàna fanapaha-kevitra. Taraiky i Courtney , ary nialan'i Matias ny fitiavantenany ka lasa [Courtney's] Cerberus. Lany fotoana ,nisahirana niaro ny tenany tsy ho azon'ny onjan-dranomasina izy. Nanao izay faraheriny izy [ho an'i Courtney] ka nanao izay azony natao hijanonana taoriany hatrany.
I Matias Mulanovich dia zandrin'i Sofia , mpilalao ‘surf’ fanta-daza iray ao Però I El Rafo, manoratra iray ao amin'ny vondron'ny blaogy La mula dia namarana ny lahatsorany [es] izay napetrak'ireo mpankafy ny lalao ‘surf':
Ny ankamaroan'ny [gazety rehetra] dia nanome laharam-pahamehana ny fandresen'i Universitario [ekipa mpilalao baolina kitra avy ao Lima] nifanandrina tamin'i CNI [ekipa mpilalao baolina kitra avy any Iquitos]. Moa ve ny lalao baolina kitra ihany no [fanatanjahantena] manana ny lanjany ?